यी राशीका मानिसले कमाउँछन् मनग्य सम्पति, सम्पति कमाउन यत्ती १ काम गर्नुहोस् ! - Citeste-ne
यी राशीका मानिसले कमाउँछन् मनग्य सम्पति, सम्पति कमाउन यत्ती १ काम गर्नुहोस् !
September 2, 2021 adminLeaveaComment on यी राशीका मानिसले कमाउँछन् मनग्य सम्पति, सम्पति कमाउन यत्ती १ काम गर्नुहोस् !
विशेषगरी ४ राशी हुने मानिसले निकै धन कमाउने तथ्य धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरु धनकमाउनकै लागि जन्मिएको हुने धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ ।
१) वृष – धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् । वृष राशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन् । शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचक पनि मानिन्छ । र यही कारण उनीहरू धन कमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् । यो राशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
कस्तो रहला तपाईको बिहिबारको भाग्य? भदौ १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्